Ukukhuselwa kukaRhulumente ziiNethiwekhi ngoncedo lweKhamera eKhombisa uMzimba | Izisombululo ze-OMG
Ukhuseleko lukaRhulumente kwiNethiwekhi ngoncedo lweKhamera eKhombisa uMzimba
Ngenxa yenkxalabo yezokhuseleko eyandayo, ukubekwa esweni kwesixeko kubaluleke kakhulu kurhulumente. "Ukunyanzeliswa komthetho we-OMG-Ikhamera yeWall-Worn Camera (i-DVR / iWIFI / 3G / 4G) / uLawulo loBungqina beDijithali- eSingapore" inikezela ngoncedo kumagosa asebupoliseni, amapolisa ezendlela, ukulawulwa kwesiko, umkhosi kunye noonogada bakarhulumente ukukhusela izixeko ngokufanelekileyo ngeteknoloji ye-biometric entsha.
Ukulawula iinkqubo zokhuseleko lwebhayometri inokufakwa kwiindawo ezichaziweyo kunye nokulandelela ukuhamba kwabantu kwimida. Oku kubandakanya itekhnoloji yokufudukela kwelinye ilizwe, ukuphuma, kunye neendlela zokulawula ukungena, kunye nokuhanjiswa kwedatha kuzwelonke. Oorhulumente bakwafuna izixhobo ezikhuselekileyo zokuhambisa unxibelelwano olubalulekileyo phakathi kwamasebe abo. Nokuba unika imiyalelo kumasebe awo, okanye uxanduva lokuphendula kubaqeshi bakarhulumente. Bathembela ekuqwalaselweni kokusebenza okuphezulu ukuze baqinisekise ukuba amakhonkco akhuselekileyo kwaye athembekile kwiofisi eyintloko. Xa amapolisa ebandakanyeka kwisigulo esiphikisayo, amalungu oluntu kunye namajelo eendaba bafuna ukwazi ukuba ngaba kukho i-BWC ebonisa ngeziganeko, kwaye ukuba isebe alizichazanga ii-BWCs, abantu baseburhulumenteni bafuna ukwazi ukuba kutheni.
Iikhamera zeVidiyo ezinxibeweyo zoMzimba zizixhobo ezibalulekileyo ezinokusetyenziswa ngokunyanzelwa komthetho ukurekhoda ukumisa ukuhamba kwabantu, ukubanjwa, uvavanyo olunzulu kunye nodliwanondlebe. Iinkqubo zekhamera enxitywe ngumzimba idla ngokuba nekhamera, imakrofoni, ibhetri kunye nokugcinwa kwedatha ebhodini. Ziyilelwe ukuba zibekwe entloko okanye zinxibe kwiindawo ezahlukeneyo emzimbeni, kuxhomekeka kwimodeli.
Ukuphila kwixesha elihlaziyiweyo lokuphelisa igajethi, ezona ntlobo zegiya zakutshanje ziguqukele kwimfuno yokubaluleka kokuqinisekisa ukhuseleko nentlalo ntle yoluntu. Ikhamera enxibe umzimba yigadget encinci enokuthi umntu ayinqumle ngentambo okanye epokothweni ngelixa abanye abanye beqinisa ngokukhawuleza. Umntu ngokufanayo unokuyakha kwikhola ekhuselayo okanye kwiiglasi. Ibhetri yale gadget eqhubekekayo iqhubeka ngaphezulu kwe-6 ukuya kwiiyure ze8 neeakhawunti ezingagungqiyo. Isenokurekhoda ngokufanayo ngexesha langokuhlwa okanye kwindawo enqabileyo. Kucetyiswa ngokukhethekileyo kubasebenzi bezokhuseleko.
Kutshanje isibini seminyaka, kuye kwacaca ukuba ibonwe ukwanda kokusetyenziswa kwewebhu. Ke, kule minyaka yangoku, nawuphi na umntu ngaphandle kwamathandabuzo unokudlulisa ifilimu yevidiyo kwizigaba ezininzi kwaye aqalise ukuphalaza okubukhoma. Kweso sifundo, ikhamera enxibe uMzimba iguqukele kwinkqubo ekhuselweyo kaRhulumente ecaleni kwazo zonke izibonelelo kunye nokungalunganga. Xa sithetha ngokhuseleko nokuhlala kakuhle, amagosa ezokhuseleko okanye abasebenzi bamapolisa bayakhala. Okwangoku oorhulumente bamazwe amaninzi benze uxanduva kumagosa amaPolisa kunye nabasebenzi bezokhuseleko ukuba banxibe ikhamera enxibe umzimba. Olu lutsha lwamva nje lubaxhobisa ukuba babhale phantsi naziphi na izinto ezenzekileyo kwindawo eyonakeleyo okanye nakweyiphi na imeko, ngexesha lengxoxo eqhelekileyo emva kwesilumkiso sokhuseleko. Oku kuluncedo kakhulu ekwandiseni ubukhali ngokuthe ngqo njengokulawula okungalunganga kunye nezilumkiso zokhuseleko.
Yiba njalo njengoko kunokuba njalo, umsebenzi wokuxabisa iikhamera ezinxibe uMzimba ukwinqanaba layo eliphantsi nangona kunjalo ngokuthe ngcembe uya kuba yigreythi esemgangathweni kwiCandelo lamaPolisa kunye nengubo yokunxiba yamaPolisa kulo lonke ilizwe. Amatyala ambalwa adumileyo aye athabatha le nto ityhilwa ngaphambili aza andisa ukuxhaphaka kwawo. Okwangoku iikhamera ezizinxibileyo zomzimba ziguqukele kwenye iphethini kuthungelwano lweemfuno zomthetho. I-ofisi yogunyaziso lomthetho isondela kwiiprojekthi zamatyala okuvavanya ukusetyenziswa kwayo.
Ukusetyenziswa Iikhamera ezinxibe umzimba zichaza ngokuthe tye noxanduva lwamacandelo amapolisa. Izifundo zibonakalise ukuba ukuphucuka kungenile kwindlela ehleliweyo kunye nokuziphatha kweecomps zisebenzisa iikhamera ezinxibe umzimba. Oku kwandisa ukulungela phakathi kwee-cops. Besiya bekhumbula imisebenzi yabo kunye nokunxulumana noluntu ngokubanzi kunye nokuchasa kakhulu ukuya kude kakhulu phakathi kokusetyenziswa kwamandla okubalulekileyo ukugcina abagxeki kunye nokusetyenziswa gwenxa kwamandla.
I ngqalelo kwimithombo eyahlukeneyo ibonakalisile ukuba xa abantu besiva ukuba bajongiwe indlela abaziphatha ngayo iyakutshintsha. Xa bezibona bephantsi kweliso kunye nokurekhodwa kwekhamera enxibe umzimba baye bethobela ngakumbi kwaye baguqula ukusebenzisana kwabo nomntu orekhodayo. Ubungqina obuhlanganisiweyo bubonisa ukuba abantu, abaziyo malunga nendlela iliso lekhamera elibabukele ngayo, bayayibamba ngokubanzi into eyamkelweyo okanye eyamkelweyo kukuziphatha ngakumbi xa umntu obukeleyo eyinto esemgangathweni. Kukho amaxesha ambalwa kubuchwephesha begosa xa umntu abambambayo kunye nokukhokela kwabo kwindawo yesehluko umahluko omangalisayo xa bobabini behlangana enkundleni kuqala. Umphenduli onxibe ngobuchule othetha kamnandi wahluke kakhulu kunomxhamli onxilileyo owayedibene nedabi kwaye egcinelwe ibhetri. Iingcali zibone ngokuqinisekileyo ukuba xa inkundla ibona ukurekhodwa kwevidiyo ukubonakala kuya kuba yinto engaqhelekanga. Kukholisa ukuba ngumhlaba omangalisayo enkundleni ukufumana umntu ophenduliweyo onxibe ngobunxibo eyunifomu enelothe yasezulwini engafani ncam nalo mntu ubanjiweyo. Ngokusetyenziswa kwekhamera ukubamba isimilo sokwenene salo mntu kunye nesakhelo sengqondo kunokuba luncedo ngokubhekisele kwinto yokuqala.
Ngaphandle uhlengahlengiso lokuziphatha olunokucingeleka, ezinye izibonelelo eziqondakalayo zeekhamera ezinxibe umzimba kwimibutho ziyancipha inkcaso yemveli kunye nokusetyenziswa ngokusemthethweni kweziganeko zamandla. Kwi-2012, iSebe lePolisa leSixeko saseRialto, ngokunxibelelene neYunivesithi yaseCambridge e-United Kingdom, likhokele ingxelo yonyaka kwiziphumo nakwiziphumo zamapolisa anxibe iikhamera zomzimba. Ngaphezulu konyaka, iintshukumo zokubukela ezahlukileyo zanikwa iikhamera ngelixa ezinye zazingenjalo. Uphando ibingumzekelo ohamba ngokulula weentshukumo ezahlukeneyo kumaxesha oviwo. Emva kwexesha lonyaka, iziphumo zazothusa. Iindibano ezazabelwe iikhamera zomzimba ziye zancipha ekusetyenzisweni kwamandla okwenzeka ngama-60% kunyaka ongaphambili. Uviwo lubhengeze ngokunjalo ukuba izikhalazo zomthonyama malunga nendibano efanayo ziye zehla nge-88% kwizigqibo zonyaka ophelileyo. Inkosi yamaPolisa eRialto ivakalise ukwehla kwenani lezikhalazo kungenxa yamagosa aqhuba ngcono okanye abahlali besebenza ngcono, inokuba yinto yabo bobabini.
Kwesinye Uphando ngeekhamera ezinxitywe ngumzimba yinkqubo ekhuselekileyo nendlela ezithoba ngayo izikhalazo zemveli, iSebe lamaPolisa aseMesa liqondise ingxelo yonyaka ikakhulu egxile ekunciphiseni izikhalazo. Inkqubo yetyala lovavanyo ibandakanya ukubuthwa kabini; Amagosa okubukela e-50 aneekhamera zomzimba ezinikezelweyo kunye ne-50 ngaphandle kweekhamera zomzimba. Zombini ezi ndibano zazithelekiswa kumgangatho wokubekwa kwamasango kunye noqoqosho kwezentlalo. Uviwo, olwalunikwe njengeqela kunye neDyunivesithi yaseArizona, lashwankathela ukuba amagosa okubukela ngaphandle kweekhamera zomzimba abenazo izihlandlo ezininzi zokuqhanqalaza. Ngaphaya koko, uphando ngokunjalo luye lwaphetha ukuba amagosa okubukela ebezinxibe iikhamera ezigqunywe ngumzimba abe ne-75% yehle ngokusetyenziswa kwezikhalazo zombane kunye ne-40% yokuncipha kwenkcaso yemveli ukusukela kunyaka ophelileyo apho iikhamera zomzimba zazingekho. isetyenzisiwe.
Iimviwo ezimbini ibonakalise ukuba iikhamera ezinxitywa ngumzimba zikhuselekile kurhulumente ekukhanyeni kwento yokuba iziphumo ezimangalisayo zibonisa ukuba iikhamera ezinxibe umzimba zinciphisa inkcaso zabahlali. Oku kulindeleke ukuba kube nomda othile wokuyalela la macala mabini ekuqwalaseleni ukuba isiqendu sirekhodwe. Umphathi wamapolisa eGreensboro uKen Miller uthi siyanxusa amagosa ethu ukuba axelele abantu ukuba bayarekhoda kuba sicinga ukuba iqhuba kumacala omabini ekhamera.
Ukurekhoda kwevidiyo kumagosa asebenzisa iikhamera ezinxibe umzimba zinokusetyenziselwa ukujongana nemicimbi yangaphakathi yeofisi. Ngaphezu koko, sisixhobo sokulungiselela esibalulekileyo. Kuphononongo oluqhubekayo oluvela kwiiNkosi zamaPolisa kwilizwe liphela ngokusetyenziswa kwevidiyo yekhamera yomzimba, iipesenti ezingama-94 zabaphenduli bavakalise ukuba bayisebenzisela uphononongo ngoosihlalo ukujongana nokuziphatha ngokusemthethweni okanye njengesixhobo sokulungiselela. Ividiyo yekhamera yomzimba inomlinganiso omkhulu wokulungiselela iimodeli. Ngelixa ujonga ifilimu, abaphathi banokuvavanya izicwangciso zangoku kwaye bakhethe ukuba ngaba ukulungiswa kufuneka kwenziwe kuxhomekeke kumava okwenene asemthethweni. Iofisi yokulungiselela inokudala iimeko ezithile ukulungiselela amagosa ayo axhomekeke kwinyani yokwazisa ebaleni. Ngaphaya koko, ukulungiselela ngokusemthethweni ngoku kuya kuba nakho ukuchaneka kwi-ofisi nganye okanye ngaphakathi kwicandelo.
Mhlawumbi kunokwenzeka esona sikhundla sigqibeleleyo ekuphunyezweni komthetho siya kubamba kwaye sinike ingxelo yokuvavanywa kolwaphulo-mthetho. Kwakhona, sisixhobo esinye esongezelelekileyo esinokunceda kwimpumelelo yolwaphulo-mthetho. Kwinqanaba xa amagosa ephendula kumgaqo ongalunganga, uninzi lwengxinano yabo kunye neyona nto iphambili ixhalabisayo kukukhusela indawo leyo kunye nokunceda abonzakele ngelishwa ngamanyathelo oncedo lwezonyango. Njengokuba beqala iintlanganiso zabo kwaye bezama ukudibanisa okwenzekileyo, kunzima ukucinga ngayo yonke into efihlakeleyo. Ngokusebenzisa ikhamera enxibe umzimba, igosa lingarekhoda imeko kunye nobuqili obuninzi bomzuzu obunokuphoswa. Njengokuba bejikeleza indawo engalunganga, bayirekhodile njengoko bekunjalo kwimpendulo yokuqala. Esi sixhobo sinokunika intabalala yedatha kumagosa abonisa kakuhle ngamanye amaxesha kamva xa inoxolo kwaye ingangxanyelwa. Umphathi wamapolisa waseDalton uParker uthi akufani kwaphela neekhamera zezithuthi, iikhamera ezinxibe umzimba zibhala yonke into eyenzekayo njengentshukumo yamagosa ejikeleza indawo engalunganga kunye nokudibana nabantu abohlukeneyo. Iikhamera ezinxibe umzimba zibaluleke kakhulu ekulondolozeni idatha ngokuchanekileyo.
Ebumelwaneni abavavanyi banikwe amandla ukongeza kwaye banomdla kwimibutho yokuthatha obu buchule. Ukuba nerekhodi yevidiyo ukubonisa inkundla kunzima ukuyifumana. EKentucky, igqwetha lommelwane elalisebenza ngommelwane likhetha ukusetyenziswa kwevidiyo enxibe umzimba. Kwenza ukuba kube lula kakhulu kubo ukuba babone iyelenqe elinokuhlawuliswa linokubakho kuluncedo olukhulu kuba awudingi bhodi yeejaji ukubona oku. Elona nxalenye lililo liyasebenza kwiimeko zobundlobongela bosapho xa isiqinisekiso sevidiyo sinikezelwa enkundleni. Ngokwesiqhelo, ngakumbi ukuba kukho umzobo wokuphathwa gadalala kwaye abantu abaxhatshazwayo bayoyika, banokukhetha ukungafaki zityholo. Ukuqinisekiswa komcimbi wentlalontle yimeko enengxaki, yeyona meko ilungileyo. Ukudityaniswa kweengozi ezingathandekiyo ezingathandekiyo kunye neyokuqala kuzo zonke iinjongo kunye neenjongo ezingacingekiyo.
Ukhuseleko lukaRhulumente kwiNethiwekhi ngoncedo lweKhamera eKhombisa uMzimba gqibela ukuguqulwa: Disemba 3rd, 2019 by admin
4210 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-3 Namhlanje